Twin Seoul | umahluko phakathi iqabane umphefumlo
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Twin Seoul | umahluko phakathi iqabane umphefumlo
▼ kwelicwecwe kumhlathi (ezihambayo unqakrazo)
amawele Seoul kunye soulmate umahluko
abangamawele Seoul kwaye kumhlangabeza ukuba ubudlelwane phakathi ummangaliso
amawele Seoul ukuwa ntlanzi CHECK
lula yokwenene [3500 yen mahala ukuba izangoma elijongene ukuze ndlela kamoya
, kuya kusetyenziswa igama iwele Seoul kakuhle. Ngokubanzi, kuwe ukuba uqhelene gangqa ngelizwi elinye iqabane umphefumlo, abanye abantu bakholelwa ukuba umphefumlo iwele kunye neqabane umphefumlo nye.
Noko ke, umphefumlo umphefumlo iqabane amawele kukho umahluko ocacileyo. Twin Seoul kwaye ekuqaleni omnye umphefumlo, koko waba zombini wazabela umphefumlo wayo. Ngamanye amazwi, umphefumlo amawele okuphikisana lakhe, unako kwakhona ukuba ngomnye wabo.
Isizathu sokuba kwakufuneka ezahlulwe ezimbini umphefumlo, xa umphefumlo iyinjongo ukuphucula nokwandisa ubomi kokufa, yaye xa wabeka nemingeni ukufunda ngothando, ukuba ngakumbi kubhetele ukuba ezahlulwe ezimbini mbono ukuba kuyenzeka ukufunda lunamandla.
Twin Seoul kwaye apha umahluko
leqabane umphefumlo, siza kujonga umahluko phakathi umphefumlo abangamawele lidubadubekile lula kunye neqabane umphefumlo.
? umphefumlo elingelolabo kunye neqabane umphefumlo
umphefumlo iwele na uhlobo omnye umphefumlo iye komnye umntu yahlulwe kabini, unako ukuba uthe umphefumlo kwiskram. Kwelinye icala kunye neqabane umphefumlo, amaxesha amaninzi ekuqaleni kubomi edlulileyo into enye intlanganiso umphefumlo ithuba, mna ubudlelwane ukuba nomunye nomtsalane. Ngamanye amazwi, ukuba kutheni kukho umahluko omkhulu kwinqanaba umphefumlo.
? ubudlelwane yomahluko
amawele Seoul, ngenxa yokuba ndisoloko ekuqaleni omnye umphefumlo, ukuxhumeka womelele kakhulu. Umphefumlo yahlulwe imibuzo emibini olunzulu, kwaye uzama ukuba ube mnye. I intshukumo kakhulu, loo nto kwakhona ezichaphazela engqongileyo kunye nokusingqongileyo ngelo xesha. Ukongeza, ukuba abe nako ukubona omnye icala ngokwam ukuba bendingazi kude kube ngoku ukuya kwenye, maxa wambi buhlungu ngelo xesha.
Kwelinye icala, ngelixa soulmate ezibini kwenye umphefumlo, ukuba oko ulwalamano ezinzulu ekuphileni kwangaphambili. Nditsho elidlulileyo uhlala kwenye umdla ngomphefumlo, siye kuye lukhula ezinye Polish nganye nganye enye. Ngoko ke, ukuba uya kuba kunye neqabane umphefumlo ukuchitha ixesha elizolileyo, nezaziwa siqhelane ayeziva zizaliswe. Ekubeni
? ahlangane amathuba
newele Seoul na umfuziselo umphefumlo wam, elinye iqela ayikho umntu omnye kuphela. Kwakhona iye ukuba akunyanzelekanga ukuhlangabezana kweli hlabathi. Emva kokuba umphefumlo yahlulwe ezimbini, umphefumlo wam iwele uhlala kweli hlabathi thina ubomi emva kokufa. Nangona siphila efanayo eli hlabathi, okusingqongileyo kunye nobudala, ipateni ezifana ilizwe lam yahlukile abaninzi, amathuba ezidibana kubonakala amancinci.
Kwelinye icala, iqabane umphefumlo ubonakala yenguquko yobomi bomntu, nokuba indima kuthiwa sele uzimisele elithile. Ukongeza, kuba iqabane umphefumlo kukho abathile kunokuba umntu omnye, lo kungenzeka ukuba kuhlangana kweli hlabathi liya ngaphezulu.
ezifezekisayo umphefumlo ngamawele ingaphandle amawele Seoul yaye eli hlabathi leyo kungummangaliso
ngomnye wabo Nto phantse kufutshane ummangaliso ukuhlangabezana. Umchasi ukuba kukho umntu omnye kuphela, oko akuthethi ukuba nabo ukuba kuvela kummandla yabo kweli hlabathi. Endaweni yoko, ngenxa yokuba xa ndadibana ngokungummangaliso ndiya imibuzo efuna ukuba omnye komnye nomnye, usenokuba uqaphele ngokukhawuleza kuba phambi komphefumlo amawele.